Usoro ojiji - Modellpilot.EU
(1) Na https://modellpilot.eu, onye na-eweta ọrụ na-arụ ọrụ ozi ọkachamara, nyocha nke ọdụ ụgbọ elu na map ihu igwe na ọnụ ụzọ ọkwa ọkwa na isiokwu nke ihe atụ na-efe efe na ịme ihe nlereanya na German na subdomains. A na-eme ntughari site na AI na ọdịnaya nke ederede German na-emetụta ihe ọ pụtara na okwu. Ntugharị nwekwara ike ịnwe njehie ma zoo ihe ọ pụtara, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na eme nke a site na iji ntụgharị ntụgharị dị elu na AI. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ederede German na-emetụta ihe ọ pụtara na ọdịnaya. Ndị debanyere aha / ndị ọrụ / ndị otu (nke a na-akpọ "ndị otu") nwere ike ịnweta ọdịnaya dijitalụ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu ma tinye ya n'onwe ha (maka mgbasa ozi nkewapụrụ iche).
(2) A na-ekewa ikpo okwu n'ime ebe a na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ. A na-achịkwa nkọwa ndị dị na nke a na nyocha ọrụ dị iche maka mgbasa ozi mgbasa ozi. Fọdụ mpaghara na ọrụ nke ikpo okwu niile nwere ike ịnweta ndị na-akwụ ụgwọ (nzukọ, ọrụ nkọwa dị n'ime, sistemụ ozi dị n'ime, wdg. Ezubere site na 2022). Ojiji nke ikpo okwu maka ndi otu ka enyere ikike ma oburu na o mebighi ihe megidere iwu ma obu okwu ndi a na onodu ya.
(3) Iwu ndị gbanwere usoro na ọnọdụ ndị a anaghị arụ ọrụ belụsọ ma ndị na-eweta ọrụ ekwenyere ha nke ọma.
2. Mepee akaụntụ onye otu
(1) Ihe dị mkpa maka iji nyiwe nke onye na-eweta ya bụ oghere nke akaụntụ ndị otu na Modellpilot.EU ma ọ bụ akaụntụ onye ọrụ na https://kleinangebote.modellpilot.eu. Ndebanye aha na Modellpilot.EU na maka ojiji nke ikpo okwu a na-eji maka ahịa nkeonwe maka ụlọ ihe atụ na https://kleinangebote.modellpilot.eu bụ n'efu.
(2) Mgbe emechara usoro ndebanye aha ahụ, nkwado nke ndaba nke usoro na ọnọdụ ndị a n'ozuzu site n'aka onye otu na ntinye nke akaụntụ ndị otu site n'aka onye na-eweta ya, a na-emekọrịta nkwekọrịta onye ọrụ n'etiti onye otu na onye na-eweta ya Modellpilot.EU. A ga-agwa onye otu ahụ ozugbo site na email gbasara ọrụ ahụ.
(3) Enweghị ikike iwu imeghe akaụntụ otu. Onye nyere gị ikikere ịjụ ngwụcha nke nkwekọrịta ahụ n'okwu ọ bụla. Onye na-eweta ọrụ ahụ ga-agwa onye ọrụ ọ bụla na-arịọ arịrịọ ozugbo.
(4) Ndị ọchụnta ego sitere n'okike na ụlọ ọrụ iwu nwere ikike iwu na-akparaghị ókè na afọ iwu nwere ike ịdebanye aha dị ka ndị otu na ndị ọrụ. Otu ịbụ ndị ọrụ azụmaahịa agaghị ekwe omume. A machibidoro ya iwu ịdenye akaụntụ onye ọrụ maka ndị ọzọ na-enweghị nkwenye ha, yana ọtụtụ ojiji nke otu akaụntụ dị iche iche site n'aka otu onye ọrụ.
3. Akaụntụ / Aha njirimara
(1) Iji mepee akaụntụ otu, onye ọrụ na-enye onwe ya aha otu. Nke a agaghi enwe aha echekwara maka ndi ozo. Onye otu ahụ nwere ọrụ maka ịhụ tupu ịdebanye aha na aha ndị ahọrọ ahọpụtaghị ikike nke atọ ọ bụla, ọkachasị ụghalaahịa, ikike nwebisiinka ma ọ bụ ikike ịkpọ aha.
(2) Ndị otu ga-eweta data achọrọ maka ndebanye aha na n'ụzọ ziri ezi. Enwere ike idezi data ndị otu n'oge ọ bụla na profaịlụ onye ahụ. Onye na-eweta ọrụ ahụ enweghị ike ịlele izi ezi nke ozi ahụ ma ọ ga-akwụ ụgwọ maka ozi ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu ozugbo amaara ya. Onye na-eweta ọrụ ahụ ga-enyocha ozi ọ bụla gbasara ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke data otu. Onye na-eweta ọrụ nwere ikike, mana anaghị amanye ya, ịlele data ndị otu yana data profaịlụ.
(3) Ndị otu ahụ ga-emeso data ha nke onwe ha na nzuzo ma chebe ha site na ndị ọzọ na-enwetaghị ikike. Karịsịa, amachibidoro ịnyefe data nnweta ndị ọzọ na-enweghị nkwenye nke onye na-eweta ya. Ọ bụrụ na onye otu mara na iji ụzọ data ha eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ ojiji nke ndị ọzọ na-akwadoghị ya, a ga-agwa ndị na-eweta ya ozugbo. Enweghi ike ịfefe akaụntụ ndị otu ahụ.
(4) A na-eji adreesị ozi-e nyere n'oge ndebanye aha maka nkwukọrịta na onye na-eweta ya wee bụrụ mkpebi maka nkwekọrịta niile metụtara nkwekọrịta n'etiti ndị na-eweta ya na onye otu ahụ. Onye na-eweta ọrụ ahụ na-ezigakwa ozi niile na ikpo okwu yana, ọ bụrụ na onye otu a rịọ ya, akwụkwọ akụkọ na adreesị ozi-e a. Naanị otu ịnweta ikike n'elu ikpo okwu nwere ike iji otu adreesị ozi-e mepụta.
3a. Ijikọ na ijikọ ọdịnaya nke ndị ọzọ
Nzukọ a (ahaziri site na 2022) na Modellpilot.eu na ọkwa ọkwa.Modellpilot.EU na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịgbanwere echiche ma mepụta mgbasa ozi. Njikọ na ibe ndị ọzọ ga-ekwe omume, mana achọrọ ikikere achọrọ tupu e bipụta njikọ ahụ, nke a ga-ezigara na Ama (na) modellpilot.eu. Ọ bụrụ na omume nnabata a ebute ịdọ aka na ntị ma ọ bụ ntaramahụhụ nye ndị na-eweta ya, ndị ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ndị ọrụ na-ahụ maka njikọ ga-akwụ ụgwọ ndị a Onye ọrụ ọgbakọ ahụ yana onye ọrụ ọkwa dị iche iche bụ ọrụ maka njikọ a na-enwetaghị ikike ma ọ bụ ntinye nke onyonyo, ederede na ọdịnaya vidiyo na mpụga nke ọdịnaya Modellpilot.EU bipụtara ma wepụta onye na-eweta ọrụ site na nsonaazụ nke omume ya na nkwupụta ọ bụla n'akụkụ nke abụọ na ndị ọzọ. Ihe niile akwụ ụgwọ n'ihi omume iwu ya na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ya. Modellpilot.EU Forum ọdịnaya (atụmatụ site na 2022), mgbasa ozi mgbasa ozi, facebook, twitter, instagram na youtube nwere ike ịkekọrịta na ikpo okwu Modellpilot.EU, njikọ njikọ yana njikọta nke vidiyo nwere ike iji naanị maka ebumnuche a na-enweghị ọkwa na nkwenye.
4. unegwọ, ịkwụ ụgwọ, ndabara
(1) Ndebanye aha iji ikpo okwu Modellpilot.EU na ọrụ ya bụ n'efu.
(2) Iji jiri ọrụ ụfọdụ nke ikpo okwu, ndị otu na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ zụta ngwugwu mgbasa ozi ma ọ bụ dị ka ndenye aha chọrọ. Ọnụ ego ahụ dabere na ọrụ ahụ na nyocha ọnụahịa bara uru n'oge a na-emechi nkwekọrịta ahụ.
(3) Ego a ga-akwụ ụgwọ site na email gụnyere VAT dị mkpa. Na-enweghị nkwekọrịta dị iche, ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ ozugbo akwụ ụgwọ maka oge a kwụrụ ụgwọ.
(4) Pay nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka nyefe na akaụntụ ndị na-eweta ma ọ bụ site na ọrụ PayPal.
(5) Ọ bụrụ na onye otu nọ na ndabara nke ịkwụ ụgwọ, anyị nwere ikike ịchọ mmasị ọmụrụ nwa nke pasent 5 karịa ọnụego ntọala nke European Central Bank. Ọ bụrụ na anyị kwupụta mmebi dị elu dị elu, onye ahịa nwere ohere iji gosipụta na mbibi etinyere na-apụtaghị ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na ọnụ ọgụgụ dị ala karị.
5. Oge nkwekọrịta
(1) A kwadoro nkwekọrịta maka iji ihe eji eme ihe n'elu ikpo okwu maka oge a na-akaghị aka.
(2) Enwere ike ịkwụsị ndị otu nweere onwe ha n'oge ọ bụla na-enweghị nlele oge ọkwa site na email na / ma ọ bụ ederede (ụzọ echedoro) nye onye na-eweta ya.
(3) Otu ego dabere na ụgwọ nwere oge nke afọ 1. A na-emegharị nkwekọrịta ahụ na-akpaghị aka mgbe mmebi (zubere site na 2022):
(3A) Otu onye akwụ ụgwọ nwere oge nke ọnwa 1 nwekwara ike mechie. Agaghị eme ka nkwekọrịta ahụ gbasaa mgbe ọ gwụsịrị (atụmatụ ya site na 2022).
(4) Ikike nke nkwụsị pụrụ iche na-emetụta ndị ọzọ.
6. Nyefee ikike ojiji site n'aka onye na-eweta ọrụ
(1) Ndị otu ahụ na-ebufe ikike ewepụtara iji onyonyo ndị ebuputara na onye na-eweta ya maka oge ndị otu a maka nzube nke mbipụta dijitalụ na weebụsaịtị na netwọkụ mmekọrịta. Ikike ojiji maka mpaghara ndị ọzọ dị ka mbipụta anaghị emetụta nke a. Enweghị ọrụ iji kwụọ ụgwọ maka ịnyefe ikike.
2) Foto, vidiyo na ederede edere na ibe a site n'aka Modellpilot.EU na nkewa ọkwa
enweghị ike ibipụta, budata, kesaa ma ọ bụ kekọrịta na ntanetị ma ọ bụ gbanwee gaa na nke izizi ma ọ bụ jiri ụzọ ọzọ maka nkesa. N'ọnọdụ ọ bụla, a chọrọ nkwekọrịta ederede ederede na Modellpilot.EU na ndị dere ha maka onyonyo, ederede na vidiyo.
7. Nkewa mgbasa ozi Modellpilot.EU
(1) Onye na - eweta ọrụ na - enye ndị otu edepụtara / ndị ọrụ edebanyere aha ya na teknụzụ teknụzụ maka ị na - arụ ọrụ ọma ahịa na ntanetị (https://kleinangebote.modellpilot.eu). Anabataghị mgbasa ozi na ọkwa azụmaahịa ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ. Ndebanye aha n'efu site n'aka onye ọrụ dị mkpa maka itinye mgbasa ozi na ikpo okwu.
(2) Onye na-eweta ọrụ anaghị abụ onye nkwekọrịta na nkwekọrịta e mere n'etiti ndị otu na mpụga ikpo okwu nke onye na-eweta ya. Mmezu nke nkwekọrịta emechara na-ewere ọnọdụ naanị n'etiti ndị otu / ndị ọrụ / ndị ọbịa. Cingtụkwasị mgbasa ozi n'elu ikpo okwu nke onye na-eweta ọrụ anaghị abụ onyinye na-akwado iwu, kama ọ bụ naanị ịkpọ oku na-abụghị nke ejikọtara iji nyefee onyinye. Onye na - eweta ọrụ anaghị akwụ ụgwọ maka nhazi, mmejuputa na nhazi nke nkwekọrịta n'etiti ndị otu / ndị ọrụ.
(3) Ojiji nke ikpo okwu maka ndi otu / ndi oru ka enyere ya aka ma o buru na o mebighi ihe ekwuru n'iwu ma obu usoro ndi a. Onye na-ere ahia gha aghaghi ikwuputa ihe nile o biputara n'eziokwu na n'uju. Ọ ghaghị ikwupụta n'eziokwu ihe niile metụtara nkwekọrịta nke nkwekọrịta ahụ.
(4) Enwere ike dezie data ahụ na profaịlụ onye ere. Onye na-eweta ọrụ ahụ enweghị ike ịlele izi ezi nke ozi ahụ ma ọ ga-akwụ ụgwọ maka ozi ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu ozugbo amaara ya. Onye na-eweta ọrụ ahụ ga-agbaso ozi gbasara ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu zuru ezu zuru ezu natara site na ụdị kọntaktị izugbe.
(5) Ndị otu na ndị ọrụ nyere onye na-eweta ọrụ ikike dị mfe, nke anaghị egbochi oge, na-agaghị ebufe yana enweghị ikike iweghachi iji ọdịnaya nke ebugharị maka mbipụta nke mgbasa ozi na weebụsaịtị nke onye na-eweta ya. Onye na enye ọrụ ahụ nwere ikike idezi ọdịnaya ndị otu a, dịka ọmụmaatụ iji hụ otu ụdịrị mbipụta maka mbipụta. Nke a metụtara ọdịnaya nke mgbasa ozi dịka ihe oyiyi, ederede, vidiyo, n'agbanyeghị ụdị edepụtara ha. Ndi otu ahu kwenyere na nhazi a.
(6) Ntinye ego nke onyinye ụgha nke naanị na-akpọsa ire ere na ọrụ na mpụga ikpo okwu nke ndị na-eweta ọrụ amachibidoro. Postdebe mgbasa ozi mgbasa ozi na-enweghị njikọ na mmalite, mmebi ma ọ bụ nhazi nke iwu na ikpo okwu nke onye na - eweta ọrụ - n'agbanyeghị ụdị - a na-anabata ya naanị na nkwenye doro anya nke onye na-eweta ya.
(7) Mgbasa ozi esitere na Modellpilot.EU na-enye oru intaneti nke onye otu dika onye mgbasa ozi nwere ike iji onyinye nke onwe (ederede, onyonyo, ikekwe njikọ vidio) na arịrịọ, ire ahịa, onyinye (nke a na-akpọzi "mgbasa ozi") ike ịmepụta ma bipụta. Dịka onye otu / onye ọrụ / nke nwere mmasị, ọ nwere ike ịlele mgbasa ozi sitere n'aka ndị otu ọzọ ma kpọtụrụ ndị otu a mgbe ịbanye. A na-enye mgbanwe nke ozi eletrọnik n'etiti ndị mgbasa ozi na ndị ọzọ nwere mmasị. Onye mgbasa ozi ahụ kwesịrị ịgbanwe faịlụ ndị ahụ ka ọ bụrụ ụdị faịlụ kwesịrị ekwesị tupu ebugo ha; maka ojiji na ngwa mkpanaaka na weebụsaịtị, Modellpilot.EU gbanwere data a.
(8) Mgbasa ozi agbasaara na Modellpilot.EU na-ebipụta mgbasa ozi na ịkpọkọta ndị na-eweta ngwaahịa na ndị nwere mmasị maka ngwaahịa na ọrụ gbasara ịme ihe nlereanya. Modellpilot.EU abụghị n'onwe ya onye na-eweta ngwaahịa akpọsaara na mgbasa ozi.
(9) N'ihe ngosi nke mgbasa ozi na na peeji nke onye ọrụ, Modellpilot.EU na-egosi ozi ndị ọzọ gbasara onye ọrụ na ọrụ ya na ọkwa ọkwa.Modellpilot.EU (nke a nwere ike ịgụnye ozi gbasara ọrụ dị ugbu a "n'ịntanetị" na akara na akara kpakpando. E wezụga nke ahụ, Modellpilot.EU nwere ikike ịdebanye aha onye ọrụ ya na-adabere n'ụkpụrụ ụfọdụ.
(10) Modellpilot.EU na - enyere ndị ọrụ aka ịlele ibe ha na-adabere na mmekọrịta mmekọrịta ọ bụla na ibe ha yana n'ụzọ enwere ike ịnweta ọhaneze. Ojiji nke sistemụ ọnụego (1 ka 5 kpakpando ọnụego) dabere na ụkpụrụ nke akara ngosi (1 kpakpando = ala ruo 5 kpakpando = ike) site na Modellpilot.EU.
Nkwado nke Modellpilot.EU bụ n'efu maka onye ọrụ ọ bụla edebanyere aha maka ntinye nke mkpesa na ajụjụ ndị ọzọ.
(12) Classifieds.Modellpilot.EU na-enyere ndị ọrụ aka ịgbaso ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ mgbasa ozi na ịchekwa mgbasa ozi ndị a site na ọchụchọ. Classifieds.Modellpilot.EU na-agwa onye ọrụ banyere ajụjụ sitere na ndị ọzọ (ndị ọbịa na-abanyeghị site na ụdị "Kpọtụrụ onye nwe mgbasa ozi), ọ bụrụ na ọ dị mkpa mgbe ị na-agbaso ọkacha mmasị ma rịọ maka ire ahịa, ọnụ na ajụjụ ndị dị n'ime ndị otu edere aha (beta) )Dị). Enweghị ike inye nkwenye na enwere ike izipu ozi ịntanetị, yabụ, a ga-agbaso mgbasa ozi n'adabereghị maka mmepe.
(13) Modellpilot.EU na-ebipụta ma kpọsaa ọkwa ọkwa.Modellpilot.EU na mgbasa ozi nke ndị ọrụ ahụ n'onwe ha tinyere ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ site na ijikọ mgbasa ozi ma ọ bụ ihe si n'aka ha na weebụsaịtị n'ime ngwa ngwanrọ ("ngwa"), na ozi ịntanetị, ikekwe mbipụta, mkpọsa ahịa redio na telivishọn ma ọ bụ na mgbasa ozi ndị ọzọ. Modellpilot.EU na-emekwa ka ndị ọzọ nwee ike ịkpọsa onyinye ha na ọrụ ha site na Modellpilot.EU na obere peeji niile na subdomains (kleinangebote.modellpilot.eu, modellflugplaetze-wetter.modellpilot.eu). Iji kwado ọrụ ndị a, Modellpilot.EU nwekwara ike inye ndị ọzọ ohere ịnweta data, ozi na ọdịnaya e bipụtara site na Modellpilot.EU. Onye ọrụ ahụ na-enye ohere ka Modellpilot.EU ahụ e kwuru na mbụ banyere mgbasa ozi ya maka ebumnuche nke mgbasa ozi na ịbawanye ọrụ nke ọrụ mgbasa ozi nke Modellpilot.EU. Nke a metụtakwara (akpaghị aka) ntụgharị maka ebumnuche nke ijikọ mgbasa ozi atụgharịrị gaa na ntinye asụsụ mba ọzọ.
(10) Modellpilot.EU na - enyere ndị ọrụ aka ịhazi nsonaazụ ọchụchọ dabere na njirisi dị iche iche (dịka ọnụahịa, edemede). Na mgbakwunye, nsonaazụ ọchụchọ ahụ na-egosikwa mgbasa ozi nke ndị na-eweta ọrụ kwetara ịkwụ ụgwọ ego ọzọ maka ngosipụta ahụ pụta ìhè (dịka nkwupụta mkpọsa mkpọsa, mgbasa ozi pụtara ìhè, mgbasa ozi kachasị elu, mgbasa ozi ọsọ ọsọ, mgbasa ozi ụlọ). Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na nhọrọ ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ maka ngosipụta a gosipụtara n'ime akụkụ nke ngosipụta mgbasa ozi n'okpuru Omume akara akara megaphone maka mgbasa ozi gbanwere.
(11) Nchịkọta ego na ojiji nkeonwe, iwu nke mgbasa ozi azụmahịa na nkeonwe Ugbu a, ọdịnaya niile enwere ike ile anya na Modellpilot.EU bụ n'efu, a na-akwụ ụgwọ ọkwa ọkwa niile.
Modellpilot.EU nwere ikikere site na ịdenye aha ndị edenyere aha ndị otu ọhụrụ nwere kọmitii a na - akwụghị ụgwọ nke izizi.
(12) A na-enyefe mgbasa ozi mgbasa ozi naanị maka ebumnuche nkeonwe, amachibidoro mgbasa ozi azụmahịa, ihe ndị ọzọ metụtara ọrụ iwu n'okpuru ụdị "Ọrụ" site na ndị na-eme ihe nlereanya maka ndị na-akpụ ihe atụ yana ịchọ ọrụ site n'aka ndị ahịa na-eme ụdị maka mgbasa ozi maka ndị na-eme ihe atụ na ndị ọkwọ ụgbọelu. na njụajụjụ ọchụchọ sitere n'aka ndị na-eme ihe nlereanya na ụlọ ọrụ azụmaahịa nwere mmasị na ụlọ ọrụ na-eme ihe nlereanya. A machibidoro mgbasa ozi ndị ọzọ enweghị ike ekenye ha na ngalaba enyere. Ọ bụrụ na agbakwunye otu bara uru na isiokwu nke ụlọ ihe atụ, enwere ike ịrịọ nke a site na iji ụdị kọntaktị ahụ. Otu nchịkọta akụkọ ga-ekwenye na arịrịọ ahụ mgbe enyochachara; enweghị isi ọ bụla enweghị ike ịmepụta ụdị ahụ.
8. Ibu ọrụ nke onye na-eweta ya
(1) Ewezuga mgbe ọ dara iwu nke ọrụ nkwekọrịta dị oke mkpa, onye na-eweta ọrụ ga-akwụ ụgwọ naanị maka mmebi ma ọ bụrụ na onye nyere ya, ndị nnọchi anya ya iwu ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere ikpe mara nke ụma ma ọ bụ oke nleghara anya. Onye na - eweta ọrụ ga-akwụ ụgwọ naanị maka ndị ọrụ ike ọzọ na ihe omume nke ebumnuche yana ọ bụrụhaala na ha emebi iwu nkwekọrịta dị mkpa na ebumnuche ma ọ bụ oke nleghara anya. Ibu ọrụ nke onye na-eweta ya, ndị nnọchi anya ya na ndị isi ụlọ ọrụ nwere njedebe na mmebi nke a na-ahụkarị mgbe emechara nkwekọrịta ahụ, belụsọ ma ọ bụrụ na ị kpachaara anya mee ya na nnukwu nleghara anya.
(2) Mmachi ndị a dị n’elu anaghị emetụta ihe omume na ndị na-eweta ọrụ na-anabata nkwenye doro anya ma ọ bụ maka mmebi n’ihi mmerụ ahụ na ndụ, ahụ ma ọ bụ ahụike.
9. Ibu maka ọdịnaya nke ndị ọzọ
(1) Onye na - eweta ọrụ anaghị akwụ ụgwọ maka izi ezi, ogo, izu ezu, ntụkwasị obi, ụdị na ogo ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ọdịnaya ndị edemede na ndị mmekọ webatara. Ndị a anaghị anọchite anya ngosipụta nke echiche sitere na onye na-eweta ya, ọkachasị onye na-eweta anaghị anabata ọdịnaya nke ndị otu / ndị ọrụ dịka nke ya.
(2) Dịka iwu iwu dị mkpa nke Telemedia Act (TMG), ndị na-enye ọrụ anaghị akwụ ụgwọ iji nyochaa ozi nke atọ nke ha zitere ma ọ bụ chekwaa ha ma ọ bụ nyocha ọnọdụ ndị na-egosi ọrụ na-akwadoghị na-enweghị ihe akaebe doro anya. Enwere ike ịtụle maka ọdịnaya nke ndị ọzọ naanị ma ọ bụrụ na onye na-eweta ọrụ maara ọrụ ma ọ bụ ozi na-akwadoghị.
(3) Mgbe ngosi nke mmebi iwu kwekọrọ na nke ndị ọzọ, onye na-eweta ọrụ ga-egbochi ma ọ bụ hichapụ ọdịnaya ahụ na-akwadoghị ma were usoro kwesịrị ekwesị iji gbochie mmebi iwu ahụ maka ọdịnihu.
10. Hapụ si Ibu
(1) Ndị otu / ndị ọrụ na-akwado onye na-eweta ọrụ na ịgbachitere nkwupụta na ndị ọzọ na-ekwusi ike megide onye na-eweta dabere na ọdịnaya ndị otu zipụrụ, ọkachasị site na ịnye ozi achọrọ maka nchekwa.
(2) Onye otu / onye ọrụ ji ụgwọ ịkwụghachi mmefu ndị dị mkpa maka ịgba akwụkwọ iwu - ọkachasị ụgwọ iwu na ụlọ ikpe dị mkpa - nke ndị na-eweta ọrụ na-eweta n'ihi nkwupụta iwu site n'aka ndị ọzọ dabere na ọdịnaya nke ndị otu na ndị ọrụ wepụtara.
11. Na-egbochi akaụntụ, mwepu nke ndị ọrụ
(1) Ọ bụrụ na enwere ihe ngosipụta nke mmebi site n'aka onye otu / onye ọrụ megide usoro iwu na mmachi amachibidoro na usoro na ọnọdụ ndị a, onye na-eweta ya nwere ike igbochi ohere onye otu ahụ. N'ihe banyere mmebi iwu ugboro ugboro, onye na-eweta ya nwere ike ịhapụ onye otu / onye ọrụ ịbanye na ikpo okwu. Mgbe ị na-ahọrọ usoro ahụ, onye na-eweta ya na-echebara ọdịmma ziri ezi nke onye otu a metụtara, ọkachasị eziokwu ma ọ bụ onye otu / onye ọrụ kpatara mmebi ahụ.
(2) Ọ bụrụ na egbochitere onye otu kpamkpam, enweghị ikike ikike iweghachite akaụntụ otu egbochiri. Ọ bụrụ na egbochie onye otu, onye otu a agaghịzi eji ọrụ onye na-eweta ya yana akaụntụ ndị ọzọ. A machibidoro iwu ịdebanye aha onye ahụ egbochiri n'okpuru aha ọhụrụ.
(3) Ọ bụrụ na egbochie akaụntụ onye otu, onye otu ahụ nwere ikike ịkwụsị nkwekọrịta onye ọrụ na onye nyere ya ozugbo.
12. Mwepu nke ibu, hụ kwa https://modellpilot.eu/haftungsausschluss
Modellpilot.EU anaghị enweta nkwa ma ọ bụ ụgwọ maka izizi na izu ezu nke ọdịnaya nke ibe ndị ahụ yana maka arụmọrụ ha, belụsọ na iwu achọrọ nkwa dị otú ahụ. Modellpilot.EU anaghị anakwere nkwa ma ọ bụ ụgwọ maka ọdịnaya nke ndị ọrụ ya mepụtara ma wepụta onwe ya site na ọdịnaya ndị ọzọ nke enwere ike ịnweta site na njikọ na weebụsaịtị Modelpilot.EU.
13. Ọrụ nke Modellpilot.EU
(1) Ihe data, ederede, onyonyo na ọdịnaya ndị ọzọ dị na peeji nke ọgbakọ ahụ (nke e mere atụmatụ site na 2022) ma ọ bụ ọkwa ọkwa, Modellflugplatz-Wetter von Modellpilot.EU (belụsọ na ekwuputara ya n'ụzọ doro anya) nwere ikike iji nwebisiinka ma nwee ike iji ya na-enweghị nkwenye ederede edere nke Modellpilot.EU, belụsọ maka iji onwe gị, enweghị ike ịmegharị, nyefee, kesaa, gbanwee ma ọ bụ echekwa ya kpamkpam ma ọ bụ n'akụkụ.
(2) A choro idebanye aha na forum / ọkwa nke Modellpilot.EU.
(3) Ọdịnaya nke nzukọ (emebere site na 2022) nke Modellpilot.EU bụ ndị ọrụ edebanyere aha ya wee mepụta echiche nke onye na-eweta nyiwe.
14. Ndị debanyere aha / ndị otu debanyere aha
(1) Onye ọrụ edebanyere aha nwere ụgwọ ka ọ mara onwe ya gbasara usoro eji eme ihe ugbu a, ntinye aka bụ akara na iwu ojiji. A ga-ebipụta mgbanwe.
(2) Onye ọrụ ọ bụla / onye ọ bụla na-eme iji gosi Modellpilot.EU ozugbo banyere mgbanwe ọ bụla na data nkeonwe ha. Ọ bụrụ na achọpụta na nkọwa nke onye otu ezighi ezi ma ọ bụ adreesị ozi-e na-adịghị arụ ọrụ, a na-egbochi profaịlụ onye ọrụ ozugbo.
(3) Ikike iji dee na nnọkọ ahụ (ezubere maka 2022) na mgbasa ozi mgbasa ozi agaghị enyefe. Notgafe data nnabata na okwuntughe nke ndị ọzọ anaghị anabata.
(4) Onweghi mgbasa ozi, edemede, ederede, akụkọ, foto, vidiyo na vidiyo ndị ọzọ nwere ike tinye na nnọkọ na mgbasa ozi nkewa nke Modellpilot.EU nke mebiri iwu ndị dị ugbu a ma ọ bụ mebie ma ọ bụ mebie ikike nke ndị ọzọ. A machibidoro njikọ na saịtị ndị dị na mpụga nke ụdị a. Ekwesiri ilebara anya na ojiji na ikike nwebisiinka, iwu megide asọmpi na-ezighi ezi (UWG) na ikike onwe onye nke ndị ọzọ dị ka BGB. Ọdịnaya sitere na Modellpilot.EU, ewepụtara mgbasa ozi na vidiyo naanị sitere na Modellpilot.EU ọwa YouTube ma nabata.
(5) Site na itinye onyinye ya na nnọkọ ahụ (ahaziri site na 2022) na ọkwa ọkwa, onye ọrụ na-ebufe ikike ojiji na-akparaghị ókè, mana ọ bụghị naanị maka mbipụta na iji ọdịnaya nke onyinye ya nye Modellpilot.EU. N'ime nke a, ọ nyere Modellpilot.EU ikike ihichapụ ma ọ bụ gbanwee ọdịnaya nke nzukọ a, ọkachasị maka ịmegharị n'ọnọdụ ọnọdụ ọrụ aka na iwu dabara adaba.
15. Imebi Usoro Ojiji
(1) Onye ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ naanị maka mmebi ọ bụla sitere na mmebi nke iwu iji usoro a (site na 2022) na ọkwa nke Modellpilot.EU akọwapụtara na usoro ndị a na ọnọdụ / ojiji na ịme ihe iji dozie nkwupụta ndị ọzọ niile. iji zere ịda iwu nke ọnọdụ ndị a o meworo.
(2) Modellpilot.EU nwere ikikere iji wepu ikike edemede site na ndị sonyere na ndị otu, ndị ọrụ na ndị otu ọrụ mgbasa ozi nkewa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha agabiga usoro ojiji na iwu ojiji na / ma ọ bụ iwu. Nke a gụnyekwara okwu mkparị megide ndị ọrụ na nkwukọrịta onwe onye. Dabere n'ụdị mmebi ahụ, igbochi nwere ike ịbụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. N'ebe a, anyị gosipụtara n'ụzọ doro anya na anaghị ekwe ka ndebanye aha ọzọ mgbe ngọngọ.
16. Nchupu nke Ibanye aha
(1) Enweghị nhichapụ blanket nke posts onye ọrụ mgbe ịdeechara ma ọ bụ igbochi ikike ndị ọrụ.
(2) Na mmeghari nke inwe nke Modellpilot.EU n'elu ikpo okwu, ewepu ya na onye ode akwukwo kwuputara ikike megide onye nochiri anya ya gafere ikike o nwere megide Modellpilot.EU.
17. Iwu metụtara / ebe ikike dị
(1) A na-ekwenye na iwu nke Federal Republic of Germany na mwepu nke iwu UN ahịa.
(2) Oche nke onye na-eweta ọrụ na Berlin bụ naanị ebe ikike maka esemokwu niile na-esite na nkwekọrịta onye ọrụ yana usoro na ọnọdụ ndị a, ọ bụrụhaala na onye otu ahụ bụ ọchụnta ego n'ime iwu nke German Civil Code, ụlọ ọrụ iwu dị n'okpuru iwu ọha ma ọ bụ iwu ọha na eze pụrụ iche.
18. Mgbanwe na usoro na ọnọdụ / ndokwa ikpeazụ
(1) Onye na-enye ọrụ nwere ikike ịgbanwe usoro na ọnọdụ n’oge ọ bụla na-enweghị ihe kpatara ya. A ga-ezigara ndị otu ahụ mgbanwe email site na email karịa izu anọ tupu ha abanye na mmetụta, na-egosipụta akụkụ ndị gbanwere. A na-agwa ndị otu ahụ iche iche banyere mkpa nke ụbọchị a kara aka na nsonaazụ iwu.
(2) Ọ bụrụ na onye otu anaghị ajụ ndaba nke usoro na usoro ọhụụ n'ime izu anọ nke nnata, a gbanwere usoro na ọnọdụ agbanweela na anabatara ya. A na-agwa ndị otu dị iche iche banyere mkpa oge izu anọ dị na email nwere ọnọdụ gbanwere.
(3) Ọ bụrụ na ndokwa nke usoro na ọnọdụ a dị ma ọ bụ ghara ịrụ ọrụ, ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ ga-anọgide na-emetụta ya.
Platform maka mkpebi esemokwu dị n'ịntanetị (OS
European Commission na-enye ikpo okwu maka mkpezi esemokwu dị n'ịntanetị (OS). Nwere ike ịchọta ikpo okwu na Platform maka mkpebi esemokwu dị n'ịntanetị (OS), ma ọ bụ site na e-mail: Ama (na) modellpilot.eu